सुदूरपश्चिममा परीक्षणको दायरा बढेन, रिपोर्ट नआउँदा २४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमै – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/सुदूरपश्चिममा परीक्षणको दायरा बढेन, रिपोर्ट नआउँदा २४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमै
सुदूरपश्चिममा परीक्षणको दायरा बढेन, रिपोर्ट नआउँदा २४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमै
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीटीएम (स्वाब राख्ने भाँडो) सकिँदा एक सातादेखि स्वाब संकलन प्रभावित भएको छ । केही स्थानीय तहले आफैं किनेर संकलन गरे पनि अधिकांश ठाउँमा स्वाब संकलन रोकिएको छ ।
कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हरि श्रेष्ठले एक सातायता संकलन रोकिएको बताए । ‘आपूर्ति शाखामा पटक–पटक माग गरिरहेका छौं । त्यहाँ पनि उपलब्ध नभएकाले आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘दैनिक १०/१५ जनाको स्वाब संकलन गर्नुपर्ने भए पनि अहिले रोकिएको छ ।’
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सात प्रदेशमध्ये संघीय सरकारबाट सबैभन्दा बढी बजेट पाएको सुदूरपश्चिमले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले आजभोलि नै किट आइपुग्ने बताए । सुदूरपश्चिममा संघीय सरकारको ३६ करोड र प्रदेश सरकारको ५७ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । तर, प्रदेशमा भने स्वाब संकलन गरिने भीटीएमलगायत सामग्री व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । गत चैत १५ मा प्रदेश सरकारले तीनवटा पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म मेसिन आइसकेको छैन ।
सुदूरपश्चिममा शनिबारसम्म १५ हजार ४ जनाको स्बाव संकलन गरिएको छ । तीमध्ये ७ सय ७० मा कोरोना पुष्टि भएको छ । ४ हजार ७ सय ५९ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीपकुमार श्रेष्ठले पीसीआर जाँचका लागि चहिने भीटीएम सकिँदा स्बाव संकलन नै रोकिएको बताए ।
धनगढीस्थित प्रयोगशालामा रहेको केन्द्रीय पशुपन्छी विभागबाट प्राप्त एकमात्र पीसीआर मेसिनमा एक दिनमा बढीमा २ सयदेखि २ सय ५० स्वाबका नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता छ । धनगढी उपमहानगरले करिब २ सय भीटीएम खरिद गरेर आरडीटी पोजिटिभ देखिएकाको पीसीआर परीक्षण गराएको छ । ‘भीटीएम सकिएकाले आरडीटी पोजिटिभ देखिएकाको २४ दिनसम्म पीसीआर परीक्षण हुन सकेको थिएन,’ मेयर नृप वडले भने, ‘शुक्रबार आफैंले भीटीएम खरिद गरेर उनीहरूको पीसीआर परीक्षण गराएका छौं ।’ प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग नगरेको उनले गुनासो गरे ।
डडेलधुरामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्न थालेको छ । दुई सातामा मात्रै ९० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । स्वाब संकलन गरेका ८ सयभन्दा बढीको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय डडेलधुराका स्रोतव्यक्ति हरि भट्टले बताए । आठ सयको परीक्षण हुंँदा अहिलेसम्म १ सय ३१ जना संक्रमित देखिएका छन् । डडेलधुराका केही स्थानीय तहले पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक किटसमेत खरिद गरेर स्वाब संकलन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले बताए ।
संकलित स्वाबको रिपोर्ट समयमा नआउँदा कञ्चनपुरमा पनि समस्या देखिएको छ । स्वाब संकलन गरेको १०/१२ दिनसम्म पनि रिपोर्ट आउन सकेको छैन । महाकाली अस्पतालले स्वाब संकलन गरेको दिनदेखि १४ दिनसम्म आइसोलेसनमा राखेर डिस्चार्ज गर्ने गरेको छ । तर कतिपयको १४ दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउँदा समस्या हुने गरेको हो । ‘स्वाब संकलन गरेको दुई हप्तासम्म पनि रिपोर्ट आएको छैन,’ जनस्वास्थ्य अधिकृत सिद्धराज भट्टले भने, ‘प्रादेशिक प्रयोगशालामा स्वाब अत्यधिक भएका कारण रिपोर्ट आउन ढिलाइ भइरहेको हो ।’
अछाममा आरडीटी पोजेटिभ देखिएका, संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र कोरोनाको लक्षण देखिएकालाई प्राथमिकतामा राखेर स्वाब संकलन गरिन थालिएको छ । स्वाब संकलन गरेर पठाएका कतिपयको रिपोर्ट नआउँदा २४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमै बस्नुपरेको छ । हालसम्म पीसीआर परीक्षणका लागि १५ सय ६० जनाको स्वाब पठाएकोमा ७ सय ४५ जनाको मात्रै रिपोर्ट आएको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी देव जोशीले बताए । स्वास्थ्य कार्यालयमा भएको भीटीएम सकिएपछि स्थानीय तहले आफैंले खरिद गरेर व्यवस्था गरिरहेका छन् ।
आइसोलेसन व्यवस्थापनमा चुनौती
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई कम्तीमा ५० बेडको आइसोलेसन तयार पार्न निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचार कार्यविधिअनुसार लक्षण नदेखिएकालाई घरकै आइसोलेसनमा राख्ने निर्देशन गरेको बताए ।
पालिका प्रमखहरू भने संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि आइसोलेसन कार्यान्वयन गर्न असहज भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न आफैंमा चुनौती थियो,’ धनगढी उपमहानगरका मेयर वडले भने, ‘अहिले कोरोना परीक्षण र उपचारमा समेत पालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्दा झन् चुनौती बढेको छ ।’ कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवाले स्थानीय तहलाई तुरुन्तै आइसोलेसन बनाउन गरिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहज भएको बताए । ‘अहिले संक्रमितको संख्या बढेपछि उपचारको व्यवस्था पनि आफैं गर भन्नु ठीक होइन,’ उनले भने ।
बैतडीमा कोरोना संक्रमित बढेपछि पालिकाहरू आइसोलेसन वार्ड निर्माणमा लागेका छन् । १० वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा सिगास गाउँपालिकाले २५ बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार पारेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताए । धनगढी उपमहानगरले वडा नं १५ को कनरीमा निर्मित जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउन सुरु गरेको छ । कञ्चनपुरका स्थानीय तहले भने हालसम्म आइसोलेसन वार्ड बनाउन सकेका छैनन् ।
आज यूके पाउण्डसहित केही देशको भाउ बढ्यो
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा ठूलो क्षती, पहिलो छायाँकार मास्केको निधन